A/Wasaaradda Caafimaadka, C/khani Sheekh Cumar, ayaa waxa uu xaqiijiyay 24 sano ka dib inay dib u furayn Xaruntii Sheybaarka Dowladda. – STAR FM SOMALIA
Waxaa maanta dib Magaalada Muqdisho looga hirgeliyay Sheybaarkii Dowladda, oo muddo 24 sano uu adeegiisii goobta ka maqnaa, waxaana suurta-gashay in juhdi badan ka dib maanta laga furo Magaalada Muqdisho.
Agaasimaha Wasaaradda Caafimaadka Somaliya, C/khani Sheekh Cumar, ayaa waxa uu xaqiijiyay 24 sano ka dib inay dib u furayn Xaruntii Sheybaarka Dowladda.
Agaasimaha oo maanta Saxaafadda kula hadlay Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu shegay in juhdi badan ay ku bixiyen, sidii ay u furi lahaayen Xaruntaasi, ka dib 24 sano oo dadku la’aayen adeegaasi.
Sidoo kale waxa uu sheegay in laga nasan doono oo laga gudbaayo dhiiggii loo qaadi jiray Magaalada Nairobi, si baaritaano loogu soo sameeyo, isagoona mahdiyay in culeyskaasi laga gudbay.
Agaasimaha wuxuu bidhaamiyay in Sheybaarka ay ku diyaarsan yihiin dhammaan Shaqaalihii loogu talla-galay inay u adeegaan bulshada Somaliyeed.
C/khani Sheekh Cumar, ayaa shacabka Somaliyeed ugu baaqay inay ka faa’iideystan Xarunta Sheybaarka cusub ee dib looga furay Magaalada Muqdisho, haddii uu diyaar ula yahay in uu daboolo baahida shacabka.